A Qorsheeyaha Europe Route caawiyaa Waxaad Dul | Save A tareenka
Home > safarka Europe > A Qorsheeyaha Europe Route caawiyaa Waxaad Dul
A Qorsheeyaha Europe Route waxaa lagama maarmaan ah in qabanqaabada aad safar tareen guud ahaan Yurub. First of dhan, waxaa jira in ka badan 10,000 Meelaha mid booqan kartaa in Europe. Sababo la xiriira tirada dalal, waxaa muhiim ah in baaritaan sida loo khariidada safarka aad. laga yaabaa in aad rabtid in aad wadada u gaar ah adiga kuu gaar ah si ay u safraan Europe. Iyo si ay u ka hor waqtiga la qorsheeyo, laga yaabaa in aad rabto in aad u leenahay tigidhada ka hor. Inta badan xusid mudan yahay waa inaad awoodaa inaad tareen buugga sodcaalladoodii oo ay ka mid yihiin adeegga macaamiisha ee afkaaga iyo in dabacsanaan sida Save A Tareen ogolaanaya.
Qorsheeyaha Europe Route arrimaha qorshaynta Muhiim ah
qorshaynta oo dhan bilaabmaa in la hubiyo in aad leedahay waraaqo socdaal oo loo baahan yahay. Sidoo kale, ka hor inta safarkaada, laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan duulaya in iyadaa ugu horeysay haddii aad ku nooshahay Yurub iyo safarka tareenka ka baxsan haddii aad ku nooshahay gudaha Europe sababtoo ah waa habka ugu fiican ee lagu safro ee Europe. Qaar ka mid ah arrimaha ay tahay u muuqdaan kuwo muhiim ah in safarka ah ee hadda jira; taariikhi sites, dabeecadda, cawayska, xeebaha, cuntada, iyo hawlaha.
Europe Route Qorsheeyaha by dalka
marka hore, Boos ayaa loo baahan yahay, waayo, tareenada habeenkii iyo tareenada ee caalamiga ah oo aad samayn kartaa on Save A tareenka. Boos waa u suurtoobaan sidoo kale Intercity tareenada-xawaaraha sare (lugu daro EuroCity iyo Intercity). wadooyinka Intercity Main waa Vienna & Linz, Salzburg, Graz & degmada Carinthia ah. Austria Europe Route Qorsheeyaha waxay bixisaa aad u wanaagsan xidhiidhada tareen caalami ah. Intaa waxaa dheer, cabitaanka iyo cuntada fudud laga heli karaa tareenka ugu iyo fursadaha cuntada laga heli karaa tareenada ee caalamiga ah. Waxaad keeni kartaa baaskiilada tareenada Austria. Waxa kale oo aad leedahay tikidh Austria in kuu ogolaanayaa inaad si ay u tababaraan u safri Lichtenstein.
Tareenada ugu badan ee Belgium u baahan Boos, si aan wax badan oo cusub oo loogu talagalay our Qorsheeyaha Europe Route halkan. Waxaa aad u talinayaa gaar ahaan in tareenada garoonka diyaaradaha, tareenada ee caalamiga ah, iyo tareenada-xawaaraha sare waxaad yeelan doontaa Boos waqti ku filan ka hor. Intaas waxaa sii dheer, tareenada ee Belgium leeyihiin 1aad iyo fadhiga fasalka 2aad. Qaar ka mid ah tareenada bixin bar a mini iyo cunto fudud kulul iyo qabow. jeer Journey gudahood Belgium yihiin dhakhso leh u socdaalay u dhexeeya, magaalooyinka waaweyn qaadashada 20 daqiiqo in saacad.
Sidoo kale in Qorsheeyaha Belgium Europe Route, aadan u baahan tahay inaad boos ah tareenada ugu badan ee Bosnia. Waxaa suurtogal ma aha in la sameeyo Boos waayo, tareenada gudaha ee Bosnia. Tan waxaa ka mid Brzi Voz tareenada soomi iyo
rakaabka degaanka tareenada. Marka la barbardhigo dalalka kale ee Yurub, baaskiilada looma ogola tareenada ee Bosnia. Intaa waxaa dheer, xidhiidhada caalamiga ah ka Bosnia maraan saldhigga Sarajevo.
Europe Route Qorsheeyaha for Bulgaria
Uma baahnid inaad wax badan Qorsheeyaha Europe Route eego Boos for Barz Vlak degaanka 'degdeg ah’ tareenada iyo sidoo kale Patnicheski tareenada maxaliga ah. Si kastaba ha ahaatee, Boos ayaa looga baahan yahay Expresen Vlak tareenada soomi iyo tareenada ee caalamiga ah. tareenada International heli karaa Bulgaria waxaa ka mid ah Bulgaria Express, The Black Sea tareenka, The Bucharest Istanbul Express oo sidaas oo kale qaar ka mid ah tareenada kale ka tago ka Sofia. wadooyinka ugu muhiimsan ee Bulgaria ee qaado 6-8 saacadood (tareenada habeenkii waa u suurtoobaan) Sofia waa, Dabcan, saldhiga ugu weyn ee xidhiidhada caalamiga ah. Baaskiilada waxaa loo ogol yahay tareenada si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dheeraad ah iyaga, waayo,.
Europe Route Qorsheeyaha la Save Tareenku
Sababta oo ah waxaa a million sababaha ay u safraan Europe, waxaannu aragnay in aad ku tikidhada jaban. Europe ayaa ugu tareenada qurux badan. Iyadoo sidoo kale muuqaal ah ugu quruxda badan, lugu daro buundooyinka iyo xeebaha. Sidaas dib markii aad maamuli wadanka aad ku safarto Qorsheeyaha Europe Route, qaado 3 daqiiqo hadda inay jartaan tikidhka tareenka cheap in Europe on Save Tareenku. Bixi iyadoo la isticmaalayo oo dhan hababka lacag bixinta oo caan ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-route-planner-trains%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah
#Bosnia #Bulgaria longtrainjourneys tareen safarka travelaustria travelbelgium